आईतवार सुर्य भगवानको पुजा र मन्त्रको महत्व !! | सुदुरपश्चिम खबर
आईतवार सुर्य भगवानको पुजा र मन्त्रको महत्व !!
जेष्ठ ९, २०७८
सुर्य देव : आइतबारको दिन भगवान सूर्यको पूजा गरिन्छ र उनलाई अर्घ्य दीइन्छ। मान्यत छ कि भगवान सूर्यको कृपा यदि तपाई माथि भएमा तपाईको जीवनको सबै संकट दूर हुन्छ। तर सूर्यलाई अर्घ्य दिनु भन्दा अघि केहि कुराको ध्यान राख्न्न आबश्यक हुन्छ।
आइतबारको दिन सूर्य उदाउनु भन्दा पहिलेनै स्नान गरौ। तयसपश्चात सूर्यानारायणलाई तीन पटक अर्घ्य दिऔ। बेलुकाको समय एक पटक फेरि सूर्य दोवलाई फेरि अर्घ्य दिऔ। अब श्रद्धापूर्वक सूर्य मंत्रको जाप गरौ। आदित्य ह्रदयको नियमित रूपले पाठ गरौ। आइतबारको दिन नुन, तेल खान बाट बचौ। यसको साथै अ‍ैइतवारको दिन एक पटक फलहार अबश्य गरौ।
सुर्यको अन्य ग्रहहरु सँग सम्बन्ध ःसूर्यको चन्द्र संग मित्रता छ भने मंगल पनि सूर्यको मित्र हुन। बुध पनि सूर्यको संगी हुन र सधै उनको आसपास घुमिरहन्छ। गुरु बृहस्पति सूर्यको परम मित्र हुन, दुइटैको संयोगले जीवात्माको संयोग भएको मानिन्छ।
शुक्र यस्तो एक ग्रह हो जसलाई ज्योतिषमा सौंदर्य प्रधान मानिएको छ, यो सूर्य संग सहज छ। जबकि शनि सूर्यका पुत्र हुन तर दुइटैको दुश्मनी छ। जहां बाट सूर्यको सीमा समाप्त हुन्छ, त्यहि बाट शनिको सीमा प्रारम्भ हुन्छ। राहु सूर्य र चन्द्र दुईटैको दुश्मन हो। जसको कुंडलीमा दुईटै बिराजमान हुन्छन राहु उनलाई विभिन्न समस्याहरुले ग्रसित गरि दिन्छा। केतु सूर्यको सम रहन्छ।
सुर्य पुजा बिधि : शास्त्र्को अनुसार यदि कुनै मनुस्यको कुन्डलिमा सुर्य दोस छ भने अ‍ैतबार सुर्यको पुजा गर्दा दोस मुक्त र फलदाई हुन्छ। भगवान भास्करको पुजा यस प्रकार गरौ। सर्बप्रथम प्रातः काल स्‍नान आदी गरेर स्वछ वस्त्र धारण गरौ, शांतचित्‍त भएर परमात्मा र सूर्य देवको स्मरण गरौ। एक समय मात्र भोजन गरौ।
भोजन तथा फलाहार सूर्यको प्रकाशमा गरौ यानि कि सुर्यास्त भए पछि नगर्ने। यदि निराहार हुदै सुय अस्त भए अर्को दिन सुर्य उदाए भने मात्र सुर्य देवलाई अर्ध्‍य दिएर मात्र भोजन गर्ने। व्रतमा नमकीन या तेलयुक्त भोजन नगर्ने अंतमा व्रतको कथा सुन्ने ।। (gnewsnepal बाट सभार)
स्वप्नशील हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, निकै गाह्रो हुन्छ सजिलै बुझन् यिनीहरुलाई !!
गीता ज्ञानः श्रीमद्भागवतगीताका प्रसिद्ध १० कुराहरु !!
कठिन परिस्थितीमा पनि विचलित हुँदैनन् यी राशिका व्यक्ति,आफूलाई कहिलै कमजोर ठान्दैनन् !!
विघटनविरुद्ध विपक्षी आक्रामक !!
महामारीमा कालोबजारीः मूल्य चढ्यो आकाश, निचोरिँदै जनता
कर्णालीः विपक्षमा मतदान गर्ने एमालेको निर्णय